Nhyiam Ahorow a Yehowa Adansefo Dii Kan Yɛe Mexico City
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
ƐYƐ afe 1932; November rekɔ awiei wɔ Mexico City. Afei na na wɔde trafik nkanea asisi kwan ho nea edi kan koraa wɔ kurow no mu, na na adi nnawɔtwe baako pɛ. Nnipa bɛboro ɔpepem baako na na ɛwɔ kurow no mu, enti na adagyew nni hɔ koraa. Nanso, afei deɛ nkanea ho asɛm no, na mframa afa so. Ná nsɛnkyerɛwfo a wɔwɔ kurow no mu adan wɔn adwene kɔ nea ɛrekɔ so saa nnawɔtwe no so. Wɔde wɔn mfiri a wɔde twa mfonini kɔɔ keteke gyinabea hɔ sɛ wɔrekotwa ɔhɔho titiriw a ɔreba kurow no mu mfonini. Ɔhɔho no ne Joseph F. Rutherford. Saa bere no, na ɔyɛ Ɔwɛn-Aban Asafo no titenani. Adansefo a wɔwɔ hɔ nso de anigye kohyiaa Onua Rutherford. Ɔbaa nnansa nhyiam a wɔyɛe wɔ ɔman no mu no bi.
The Golden Age nsɛmma nhoma no kae sɛ, “Akyinnye biara nni ho sɛ saa nhyiam yi bɛboa paa ama wɔatrɛw Nokware no mu wɔ Mexico adehyeman no mu, na yɛn werɛ remfi da.” Nhyiam a nnipa 150 pɛ kɔɔ ase deɛ, dɛn paa na ɛma ɛbɛyɛɛ nhyiam titiriw saa?
Ansa na wɔreyɛ saa nhyiam no, na Ahenni ho asɛm no ntrɛwee ahe biara wɔ Mexico. Efi afe 1919 no, na wɔyɛ nhyiam nketewa wɔ ɔman no mu, nanso mfe bi akyi no, asafo dodow a ɛwɔ hɔ no so tewee. Bere a wobuee baa dwumadibea wɔ Mexico City afe 1929 no, na ayɛ sɛ anidaso wɔ hɔ. Nanso, na akwanside bi wɔ hɔ. Ahyehyɛde no de akwankyerɛ maa anuanom sɛ, sɛ wɔwɔ asɛnka mu a, mma wonni gua. Wei maa colporteur anaa ɔkwampaefo bi bo fuwii ma ɔkɔtew n’ankasa Bible adesua kuw. Saa bere no, baa dwumadibea sohwɛfo no de ne ho kɔhyɛɛ nneyɛe bɔne bi mu ma enti wɔde obi besii n’ananmu. Ná ehia sɛ wɔhyɛ Adansefo anokwafo a wɔwɔ Mexico no gyidi den.
Onua Rutherford nsrahwɛ no mu no, ɔhyɛɛ saa anokwafo yi nkuran paa. Ɔmaa ɔkasa mmienu a ɛka koma wɔ nhyiam no ase, ɛnna ɔmaa ɔkasa nnum a emu yɛ hyew wɔ radio so. Wei ne nea edi kan koraa a anuanom faa radio so trɛw asɛmpa no mu wɔ Mexico man no mu nyinaa. Nhyiam no akyi no, wɔpaw baa dwumadibea sohwɛfo foforo, na ɔyɛɛ asɛnka adwuma no ho nhyehyɛe. Afei Adansefo no nyaa ahoɔden foforo na wɔde nsi ne ahokeka yɛɛ asɛnka adwuma no, na Yehowa hyiraa wɔn.
Afe 1941 nhyiam, Mexico City
Afe a edi hɔ no, wɔyɛɛ nhyiam mmienu wɔ ɔman no mu. Wɔyɛɛ baako wɔ kurow bi a ɛda mpoano a wɔfrɛ no Veracruz, ɛnna wɔyɛɛ baako nso wɔ Mexico City. Nsi ne ahokeka a anuanom no de yɛɛ asɛnka adwuma no fii ase sow aba pa. Afe 1931 no, na adawurubɔfo 82 na wɔwɔ hɔ. Nanso mfe du akyi no, wɔn dodow buu bɔɔ ho mpɛn du! Afe 1941 no, wɔyɛɛ Teokrase Nhyiam wɔ Mexico City, na nnipa bɛyɛ 1,000 na wɔkɔɔ ase.
“WƆATE WƆN HO AGU MMƆNTEN SO”
Afe 1943 no, Adansefo no de “Ɔman a Ade Ne Ho” Teokrase Nhyiam no asɛmti bobɔɔ wɔn anim ne wɔn akyi faa kurom bɔɔ nhyiam no ho dawuru. Wɔyɛɛ nhyiam no wɔ Mexico nkurow 12 mu. * Wɔde nkrataa mmienu a wɔakyerɛkyerɛw so sensɛn wɔn kɔn mu; baako bɔ wɔn anim ɛnna baako nso bɔ wɔn akyi. Saa kwan yi na Adansefo no faa so bɔɔ wɔn nhyiam ho dawuru fi afe 1936.
Nkrataa a wɔakyerɛkyerɛw so a ɛsensɛn nkurɔfo kɔn mu wɔ Mexico City; wotwa fii nhoma bi mu afe 1944
Nsɛm a Adansefo no kyerɛkyerɛw guu nkrataa so sensɛn wɔn kɔn mu de faa Mexico City no kɔɔ yiye. Enti nhoma a wɔato din La Nación kae sɛ: “[Nhyiam] no da a edi kan no, wɔmaa [Adansefo no] too nsa frɛɛ nnipa pii. Ɛda a edi hɔ no, nnipa baa nhyiam no ara ma na ebinom nnya baabi ntena.” Bere a Adansefo no faa kurom a nneɛma kɔɔ yiye saa no, Katolek Asɔre no ani annye ho, enti wotuu wɔn ani sii Adansefo no so. Ɔsɔretia no ammɔ anuanom mmarima ne mmea no hu; wɔkɔɔ so bɔɔ dawuru no. Nhoma a wɔato din La Nación no bɔɔ amanneɛ sɛ: ‘Kurow mũ no nyinaa hui sɛ mmarima ne mmea de nkrataa a wɔakyerɛkyerɛw so abobɔ wɔn anim ne wɔn akyi rebɔ dawuru.’ Nhoma no de anuanom a wɔnam Mexico City mmɔnten so mfonini baa mu. Wɔkyerɛw wɔ mfonini no ase sɛ: “Wɔate wɔn ho agu mmɔnten so.”
“MPA NO SO YƐ HYEW NA ƐYƐ TOFOO SEN SEMƐNTE SO”
Saa bere no, na wɔnyɛ nhyiam wɔ mmeae pii wɔ Mexico. Enti, na Adansefo dodow no ara de nneɛma pii bɔ afɔre ansa na wɔatumi akɔ bi. Ná wɔn a wɔkɔ nhyiam no pii fi nkuraase. Ná keteke ntumi nkɔ hɔ, na na karkwan mpo nni hɔ. Asafo bi kyerɛw sɛ, “Tɛlɛfon ahama nko ara na etwam wɔ hɔ baabi.” Enti, na wɔn a wɔkɔ nhyiam no tena mfurumpɔnkɔ so anaa wɔnantew twa kwan nna pii ansa na wɔakɔfa keteke akɔ kurow a wɔreyɛ nhyiam no.
Ná Adansefo dodow no ara yɛ ahiafo; ná wonni karsika a wɔde bɛkɔ asan aba, nea wɔde bɛkɔ nko ara na na wobenya. Wodu hɔ a, na wɔn mu pii tena Adansefo fie. Ná Adansefo a wɔwɔ hɔ no yi wɔn yam gye wɔn nuanom fɛw so. Afoforo nso, na wɔda Ahenni Asa so. Bere bi anuanom a wɔkɔɔ nhyiam no bɛyɛ 90 tenaa baa dwumadibea hɔ. Anuanom “kekaa nnaka a nhoma wom 20 bɔɔ ho de yɛɛ mpa maa wɔn mu biara.” Yearbook bɔɔ amanneɛ sɛ anuanom ani sɔɔ nea wɔyɛ maa wɔn no, na wɔkae sɛ “mpa no so yɛ hyew na ɛyɛ tofoo sen semɛnte so.”
Saa Adansefo no ani gyei paa sɛ wɔne wɔn nuanom Kristofo bɔɔ mu yɛɛ nhyiam. Wɔannu wɔn ho koraa sɛ wɔde nneɛma bɔɔ afɔre baa nhyiam no. Ɛnnɛ, aka kakraa bi na adawurubɔfo a wɔwɔ Mexico dodow adu ɔpepem baako. * Wɔda so ara kyerɛ nneɛma ho anisɔ. Amanneɛbɔ bi a Mexico baa dwumadibea de too gua afe 1949 kaa anuanom ho asɛm sɛ: “Ahokyere a anuanom faa mu nyinaa akyi no, nsi ne ahokeka a wɔde som Yehowa no ano mmrɛɛ ase. Nea enti a ɛte saa ne sɛ, sɛ wowie nhyiam biara a, nkɔmmɔ a ɛho hia wɔn paa a wɔbɔ no, emu baako fa nhyiam no ho, na wonnyae ho nkɔmmɔ da. Asɛm a anuanom taa bisa ne sɛ, Da bɛn na yɛbɛyɛ nhyiam bio?” Amanneɛbɔ a wɔde too gua saa bere no, saa na yɛbɛka afa anuanom a wɔwɔ hɔ nnɛ nso ho.—Tete wɔ bi ka, Central America.
^ nky. 9 Afe 1944 Yearbook no kaa nhyiam no ho asɛm sɛ, ɛmaa Yehowa Adansefo ho asɛm trɛwee kɛse wɔ Mexico.
^ nky. 14 Nnipa 2,262,646 na wɔkɔɔ Nkaedi wɔ Mexico afe 2016.
“Ɔkwan Biara Nni Hɔ a Ɛyɛ Mmonkyimmɔnka Anaa Ɛware Dodoodo”